Karazan-taratasy: inona ny taratasy ary inona ny karazana taratasy misy | Famoronana an-tserasera
Androany dia anisan'ny andavanandrontsika isan'andro ny taratasy. Na dia miha tsy dia fahita firy aza izy io, satria manandrana mampiasa azy faran'izay kely azo atao isika, ary satria miankina bebe kokoa amin'ny teknolojia, ny marina dia, tamin'ny faran'ny andro, azo antoka fa nifandray tamin'ny karazana taratasy isan-karazany ianao . Ohatra, miaraka amin'ny fandaharam-potoana, boky, faktiora, kahie ...
Any amin'ny birao maro, ary koa amin'ny trano, dia singa iray tena ilaina izy io. Fa ny mety tsy fantatrao dia ny hoe misy karazan-taratasy maro samihafa. Raha ny marina dia afaka manisa 16 isika ary azo antoka fa hamela vitsivitsy hafa. Fa inona avy ireo karazana? Mitovy daholo izy rehetra? Ity sy ny maro hafa no tianay horesahina aminao anio.
2 Inona no toetra ananan'ilay taratasy?
3 Karazana taratasy
3.1 Repro, offset na taratasy fanontana
3.2 Satin na taratasy manjelanjelatra
3.3 Taratasy fametahana
3.4 Taratasy mifono na mifono
3.5 Taratasy legioma na tsy misy karbonika
3.6 Taratasy asa-tanana
3.8 Takelaka taratasy
3.10 Karazan-taratasy: Taratasy voaverina
3.11 Karazan-taratasy: taratasy ekolojika na bio
3.12 Karazan-taratasy: taratasy taratasy
3.13 Karazan-taratasy: taratasy taratasy
3.14 Karazan-taratasy: Gazety
Ny taratasy dia azo faritana ho toy ilay fitaovana izay miavaka amin'ny ravina manify izay mifangaro amin'ny kofehin'ny legioma, na amin'ny akora totoina ary afangaro amin'ny rano, ankoatry ny fanamainana sy hamafisana. Ny fampiasana azy dia ny manoratra, manao sary, mamono sns.
Mety tsy fantatrao fa tany Chine no niandohan'ireo taratasy ireo. Mba hanaovana izany dia tsy maintsy miverina amin'ny taonjato faharoa ianao, izay, miaraka amin'ny landy, mololo, landihazo ... nahavita namolavola ireo karazana taratasy voalohany izy ireo. Na izany aza, misy mpahay tantara hafa izay manome ny Egyptianina hatramin'ny nanombohany ny papyrus, tamin'ny alàlan'ny fototr'ireo zavamaniry naniry teo akaikin'ny reniranon'i Neily.
Raha ny marina, azo antoka, tsy fantatsika hoe iza no namorona azy, fa fantatsika fa ireo firenena roa ireo no voalohany nampiasa azy.
Inona no toetra ananan'ilay taratasy?
Ankehitriny rehefa mahalala bebe kokoa momba ny taratasy ianao dia tokony ho fantatrao hoe inona ireo toetra mampiavaka azy mba hahatakarana ny antony isian'ny karazana taratasy isan-karazany. Ary io dia ny, ny fiovana amin'ireo toetra ireo dia mamaritra izay heverina ho karazana iray na iray hafa.
Noho izany, ireo fananana manana andraikitra dia miankina amin'ireto manaraka ireto:
Ny fitsipi-pitenenana. Tsy maintsy takatrao amin'ny maha lany ny andraikitra io. Ny zavatra mahazatra dia ny ampiasao taratasy misy ny fitsipi-pitenenana 80 foana. Ireo an'ny 90 na 100 dia ampiasaina hanontana antontan-taratasy manan-danja ary manana endrika kanto, toy ny lohateny, ny fandaharam-pianarana ...
Ny hatevin'ny taratasy. Izy io dia manondro ny sakany misy eo anelanelan'ny tarehy roa, izany hoe, raha mahia na matevina. Mba hanomezana hevitra anao, ny taratasy matevina dia mety ho tonga lafatra amin'ny sary hosodoko miaraka amin'ny tempera satria fantatrao fa tsy hiparitaka amin'ny ilan'ny taratasy na tasy ilay izy.
Ny habetsahana. Manondro ny habetsaky ny rivotra ananan'ny taratasy izy io. Satria eny, ny taratasy dia vita amin'ny rivotra ary arakaraka ny ananany no anaovany azy dia maivana kokoa, nefa ho chubbier ihany koa.
Fahasarotana. Ny toetra iray ananan'ny taratasy dia ny fahasarotany, izany hoe, raha malama izy na manana sary izay misy fiatraikany amin'ny fomba fanoratana na fanontana.
Ny opacity. Farany, manana ny opacity ianao, na izay mitovy, ny fahaizan'io taratasy io mandray ny ranomainty. Arakaraka ny maha-opaque azy no hahabe ny mampiavaka azy ny fanontana na ny zavatra soratanao amin'ny taratasy.
Mifantoka amin'ny karazana taratasy ankehitriny, dia tokony ho fantatrao fa eny an-tsena dia maro ny azo isafidianana, ary ny tsirairay amin'izy ireo dia azo ampiasaina amin'ny tanjona iray na hafa. Afaka mahita izao manaraka izao ianao:
Repro, offset na taratasy fanontana
Ity no taratasy malaza indrindra, ny iray azonao atao any an-trano na any amin'ny birao ary koa ilay tena novolavolaina indrindra. Matetika izy ireo dia manana lanjany eo anelanelan'ny 70 sy 100 grama, saingy misy fotoana mety ahitanao 100 sy 120 grama. Mampiavaka azy ireo ny fanaovana azy amin'ny cellulose kely sy fotsifotsy araka izay tratra.
Satin na taratasy manjelanjelatra
Izy io dia miavaka amin'ny maha taratasy mamirapiratra azy. Ho fanampin'izay, malefaka be izy raha mikasika azy ary na dia amin'ny fahitana azy aza dia toa mamiratra. Mazava ho azy fa noho ireo toetra ireo dia lafo kokoa noho ny mahazatra izy ary matetika ampiasaina hanontana sary avo lenta.
Araka ny tondroin'ny anarany, dia miavaka amin'ny taratasy misy sisiny iray mamela azy hametahana ny tampony. Noho io antony io, ity taratasy ity dia azo atao pirinty amin'ny lafiny iray ihany, satria amin'ny lafiny iray dia misy sarimihetsika adhesive vita amin'ny resins mangarahara sy ny rubèt synthetic hialana amin'ny tasy.
Taratasy mifono na mifono
Fantatra kokoa amin'ny anarany voalohany izy io ary mampiavaka azy amin'ny famokarana fibre fohy fohy kokoa sy ny fibre lava lava kokoa. Ho fanampin'izany, ny selulose dia omena sosona manarona, toy ny hoe manarona, ka mahatonga ny fahatsapana ho tsara kokoa sy voafaritra kokoa.
Ity no taratasy izay matetika ampiasaina amin'ny bokikely, boky na magazine.
Taratasy legioma na tsy misy karbonika
Taratasy manify be io, mora tapaka, satria mazàna tsy mihoatra ny 55 grama ny lanjany. Ny tanjon'ity taratasy ity dia ny "handika" zavatra hafa. Izany no antony ampiasana azy matetika amin'ny fametrahana azy eo ambanin'ny taratasy iray sy eo ambonin'ilay taratasy iray hafa mba handefasana izay voasoratra, nosarihana na natonta tamin'ny lafiny iray (ka mivoaka amin'ny maro izy io.
Ireo karazan-taratasy ireo dia aseho ho an'ny asa-tanan'ny ankizy satria izy ireo dia azo atao amin'ny karazana henjana, loko, firafitra sns.
Ny baoritra, ary koa ilay ho hitantsika manaraka, dia taratasy ihany koa. Amin'ity tranga ity dia mampiavaka azy ny hoe matevina kokoa, henjana ary be voluminous kokoa noho ny malaza (taratasy reprim). Amin'ity tranga ity dia io no ampiasaina hanamboarana singa hafa izay mila hamafisana kokoa.
Ny baoritra dia tsy mijanona ho taratasy, fa tsy mitovy amin'izany ny hateviny sy ny elaboration izay tanterahina. Ary io dia ny famoronana azy, fa tsy fanalefahana azy, ny vita dia ny fampiasana paty manta.
Ny baoritra tsirairay dia vita amin'ny sosona taratasy telo. Eo anelanelan'ny roa, ity sosona fahatelo ity dia manana firafitra mifangaroharo, izay no ahazoana ny hamafin'ny boaty.
Ireo karazan-taratasy ireo dia eo anelanelan'ny carton sy ny baoritra. Fantatra amin'ny maha fitaovana anao anaovana ny ankamaroan'ny boaty sakafo, toy ny cookies, serealy, menaka gilasy, sns. Malemy noho ny baoritra, fa tsy toy ny baoritra, dia mahita taratasy vita amin'ny kofehy fohy ianao ary mahatonga azy hanana loko volondavenona na volontany.
Karazan-taratasy: Taratasy voaverina
Ny taratasy voaverina dia vita amin'ny taratasy fako, ka misy famaranana tsara nefa tsy toy ny vaovao. Saingy, ity karazan-taratasy ity dia manampy amin'ny fikolokoloana ny tontolo iainana satria, ankoatry ny loko, izay mazàna mavomavo kokoa, fotsy maloto ary fanoherana ambany kokoa, dia azo ampiasaina amin'ny fomba mitovy amin'ny papelika repr.
Karazan-taratasy: taratasy ekolojika na bio
Mitovy amin'ny fanodinana indray, tsy mitovy karazana taratasy izy ireo, satria tsy mitovy amin'ny iray hafa ity iray ity. Amin'ny inona? Ity taratasy ity dia avy amin'ny hazo fanapahana tokoa, saingy natao hitrandrahana ala iray hafa, raha toa ka hokapaina ny iray hafa, amin'ny fomba hitazomana ny fitaovana tsy misy fatiantoka.
Karazan-taratasy: taratasy taratasy
Bond aho, taratasy taratasy… Ahoana ny fahitanao izany? Eny, aza very be loatra satria tsy misy ifandraisany amin'izany. Izy io dia taratasy misy karazana litera misy fitsipi-pitenenana izay afaka manomboka amin'ny 60 ka hatramin'ny 130 grama ary, araka ny efa nolazainay, dia ampiasaina indrindra amin'ny taratasy taratasy, na amin'ny valopy na ao anatin'ny boky sasany aza.
Azo antoka fa ny zavatra voalohany noeritreretinao momba ny sela. Ary tsy diso lalana ianao. Raha ny marina, napkin na taratasy fidiovana koa dia tafiditra ao anatin'ireny karazana taratasy ireny. Izy io dia miavaka amin'ny alàlan'ny malefaka sy mandray be loatra (noho ny fanoherana ny rano).
Izy io no ampiasaina amin'ny fanaovana gazety ary namboarina tamin'ny akora vita amin'ny taratasy namboarina na sombin-taratasy hafa satria ny tanjona dia ny tsy hahatonga azy io ho kanto. Izany no mahatonga azy hirona amin'ny famaranana henjana sy fofona miavaka. Raha ny marina, aorian'ny ora vitsivitsy, na ny ampitso aza, manomboka miharihary ny fahasimbany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Karazana taratasy
Adobe Premiere Pro, Premiere Rush ary Audition dia azo alaina ao amin'ny Apple M1 Systems amin'ny beta